Oge Ọgụgụ: 3 nkeji A Europe Nsoro Planner dị oké mkpa na-ahazi gị ụgbọ okporo ígwè na njem gafee Europe. Na mbụ, e nwere ihe karịrị 10,000 ebe otu onye nwere ike ileta na Europe. N'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ebe, ọ dị mkpa iji chọpụta otú ese njem gị. Eleghị anya ị chọrọ…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Best nri iri na ụgbọ oloko na-na n'oge nnọọ na-atọ ụtọ. N'ihi na ọtụtụ ụgbọ oloko na-enye 5-kpakpando ulo na klas mbụ nri. Nke a na-agụnye nri mere ererimbot ama chefs. Probably na-eleghị anya na-eji na-agụ banyere ịtụnanya nri n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ mara mma ị…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ọnụ ala Europe dị ọnụ ala bụ isiokwu na-ekpo ọkụ. Na mbụ, njem nleta na Europe pụrụ ịhụ ihe nile si oké kọfị ụlọ ahịa na mara mma osimiri. Dị ka a n'ihi nke obodo ndị dị ka Venice, Rome, na Paris ọtụtụ nde ndị njem aga Europe kwa afọ. Anyị mepụtara ndepụta nke…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ụgbọ okporo ígwè njem na ụwa dị nnọọ ogologo! Ndị a njem nwere ike na-a ọtụtụ ụbọchị na-ekpuchi ọtụtụ puku kilomita. Ya mere, ebe a bu nbuli-ije na-ewere ndị fọdụrụ n'ezinụlọ na Europe, Asia, Australia, na US. Edere isiokwu a ka ọ muta…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Bernina Express bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma ụgbọ okporo ígwè njem na ụwa. Na mbụ, Na Rauma Line site na Dombas ruo Andalsnes (Norway), ị pụrụ ịnụ ụtọ echiche nke elu ọnụ ọnụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụ ugwu ugwu na ugwu dị larịị ka ị na-agafe Rauma…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Gịnị mere na UK Train ride ahịa elu? Ọnụ ahịa ụgbọ oloko UK arịala elu nke ukwuu. Europe na-atụle nwere ihe kasị mma ụgbọ okporo ígwè njem na ụwa. environmentally friendly ụgbọ okporo ígwè njem na Europe nwere ebe ndị mara mma. Train njem nweta n'ebe nile si n'ime obodo na obodo nta ka…